तपाईंको बच्चाको छाती घ्यारघ्यार गर्दैछ,खतरनाक हुनसक्छ -सतर्क बन्नुहोस्- — Harpraharnews.com
चिसो मौसममा बच्चालाई रुघाखोकी, कफ जम्ने समस्या हुन्छ । त्यही कारण हामी सकेसम्म उनीहरुलाई न्यानो कपडा लगाइदिन्छौं ।
गर्मीको मौसममा पनि बच्चाहरुको कफ जम्ने, रुघाखोकी लाग्ने समस्या हुन्छ । उनीहरुको छाती घ्यारघ्यार हुनेगर्छ । गर्मीमा धेरैजसो पसिनाले यस्तो समस्या हुनेगर्छ ।
-असर के हुन्छ ?
स्वास प्रस्वास सम्बन्धि समस्या आफैमा जटिल समस्या हो । किनकी यसकै कारण कयौ पटक बच्चाहरुले राम्ररी सास लिन सक्दैनन् । र, सास लिन नसकेको कारण बच्चाहरुको स्वास्थ्य विग्रने गर्छ । कहिलेकाही राम्ररी सास लिन नसकेकै कारण उनीहरुको मृत्यु समेत हुनसक्छ । त्यसैले, यो समस्याबारे बेलामै सचेत हुन आवश्यक छ ।
-कसरी थाहा पाउने ?
सास नलीमा कफ जम्मा भएमा बच्चाले सास फेर्दा छाती घ्यारघ्यार हुने गर्दछ । त्यस्तै, बच्चाहरुलाई स्यास्या हुने गर्दछ । कयौको नाकबाट बाक्लो सिगान समेत बग्ने गर्छ ।
यस्तो समस्या भएमा बच्चाहरु बेजोडले रुने गर्दछन् । तर कतिपय अभिभावकहरुलाई बच्चा किन बेस्सरी रोयो भन्ने समेत ज्ञान हुँदैन । त्यसैले, यस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्दछ ।
-सास लिदाँ आवाज आउने , छाती घ्यारघ्यार हुने
फ्रान्सेली प्रशिक्षक डिडिएर डेसच्याम्पले रचे अर्को कीर्तिमान